Xadiis Saxiix ah: Xajka Eebe Weyne Aqbalo Been Kama Daba Marto – Rasaasa News
Nov 18, 2011 dad Sucuudiga jooga
Jwxo-shiil, oo bidaanad xidhay sheegayna in uu xajiyey, ka dibna dad jooga Sucuudiga been ugu sheekeeyay, nasiib wanaag Sheekh Axmed Makaahiil ayaa beeniyey sheekada Jwxo-shiil, isaga oo isna ka sheekeeyey sheeko maldahan.
Shalay ayey ahayd, kolkii ay TV-yada caalamka ka sheegeen dhalinyarada caanka ah ee Oohinta Qarsoon in Jwxo-shiil, ka dhacay qaaraan ay caruur agoon ah u uruuriyeen. Qaybtii uu ka dhacay mooyee intii ay u diideen ayey dhalinta Oohinta Qarsoon todobaadkii hore u qaybiyeen caruur agoon ah oo Jwxo-shiil, laayey walidiintood. Dhalinyaradaas agoonta ah oo ku xaraysan xarun lagu xanaaneeyo oo ku taal magaalada Jijiga ee caasimada degaanka Somalida Ethiopia.
Xaaji Jwxo-shiil, oo aan hadalka si fiican isugu xidhi karin, ayaa kolk uu la hadleyey dad soo xajiyey oo ay ku kulmeen Hoteel sheegay in ay kooxdiisu sii xoogaysanayso Ethiopiana ay hoos u sii socoto isaga oo yidhi “kol dhaw waanu ka adkaanaynaa Ethiopia.” Qaar ka mid ah dadka ayaa xamili waayey waxa uu qufayo kolkaas bay dhaheen subxaanalaa!
Jwxo-shiil, wuu gaboobay waana markii ugu horaysay ee uu koofiyada sunaha u ah muslimiinta madaxa saarto. Dunuubta uu galay ee isugu jira dilka, khayaanada, dhaca iyo beentu wax qarsoon ma ah, hawlihii uu ku jirayna way soo xidhmeen.
Sida aan maqalay waxaa Jwxo-shiil, ku dhaliyey in uu Sucuudi aado sheeko dacaayad ahay oo uu qoray wargays ka soo baxa Jarmalka oo ahayd; in dalka sucuudigu laba sano ka dib meelaha shuruudaha xajka laga guto ay ku xidhi doonto bir sheegi doonta dadka damiyada waaweyn galay, kuwaas aan loo ogolaan doonin in ay xajiyaan.
Mahadi ha ka gaadhee warsidaha ogadentoday ayaa noo cadeeyey in uusan Jwxo-shiil xaj tagin ee uu magaalooyin Sucuudiga ah qarafaysi u tagay intuu dhar cad cad xidhay.
Sheekh Axmed Makaahiil,oo ka mid ahaa dadkii xaaji Jwxo-shiil dhagaysanayeyey kol uu sheekaynayey, ayaa sheeko Jwxo-shiil si dadban u beeninaysa ka sheekeeyey oo yidhi “baribaa waxaa jirey nin maskiin ah oo xoolo adduunyo 20 neef oo adhi ah ka leh. Maalin maalmaha ka mid ah yuu ninkii la kulmay wadaad meel muxaadaro ka jeedinaya oo wax bixinta ka hadlaya iyo sida sadaqadu xoolaha u badiso. Wadaadkii baa wuxu yidhi qofkii neef xoolo ah bixiya illaahay 10 buu uga dhigi, kii 10 bixiyana illaah 100 boqol buu uga dhigi. Ninkii maskiinka ahaa baa fakaray oo yidhi oo haddii aan 20 ka neefba bixiyo sow 200 oo neef heli mayo. Xisaab ayuu u fadhiistey markii uu dood dheer naftiisa la yeeshayna wuxuu talo ku soo gooyey inuu 20 neef bixiyo oo sadaqaysto si uu 200 oo neef u helo. Ka dib markuu 20 neef bixiyey ayuu ninkii xeraddii 20 neef gali jireen oo madhan iska horfadhiistey. Ninkii oo is leh tolow goormay 200 ee neef iman oo xeradhii adhiga ku hor daalay ayuu shuban iyo daacuun xumi ku dhacay.”
“Ninkii baa naftiisa u yaabay ka dib illaahay buu baryey. “Illaahow waxba 200 boqol oo neef ha i siinine shubanka uun iga bogsii. Ninkii oo shubankii la il daran oo xeradii adhiga hor kuududa ayaa waxaa irida illaah uga soo galiyey wiil uu dhalay oo 200 oo neef oo adhi ah wata oo jahaad uu asxaabtii la galay qayb ahaan uga soo heley. Hadaba ninkii maskiinka ahaa oo illaah shubankii ka bogsiiyey, damaciisiina u aqbalay ayaa maalin kale la kulmay ninkii wadaadka ahaa oo isla mawduucii ka hadlaya oo leh hadaad hal neef bixiso illaah 10 buu ku siin iyo wax la mid ah. Ninkii maskiinka ahaa ayaa intuu soo booday yidhi: “Sheekhow arinta aad sheegaysaa walahi waa run laakiin shuban xanuun badan baa ka horeeya ee ha la ogaado”. Sheekadan murtida xambaarsan ee sheikh Axmed Makaahiil waxay soo koobtey dhamaan hadalkii beenta ahaa ee Jwxo-shiil. “Xoriyadu waa shay aan wax loo dhigo la arag khayaano iyo been beena laguma keeni karo, maalka oo la xafido iyo kuwa u dhinta xornimada oo ubadkooda la xanaaneeyo ayaa lagu gaadhi karaa.”
Xajka xooladhac ah lagu tagayo dambi dhaaf Eebe walaan lagu helaynin. Diintuna waxay tidhi Dunuubta Eebe weynelaga galay wuu cafiyaa laakiin, dunuubta Aadanaha laga galay walaan waligeed la cafiyin.
Jwxo-shiil-na, haduu bidaanad qaato iyo haduu dhakada baneeyo waluuna dambi dhaaf ka helayn hebaladuu dilay ee caruurtoodii agoonta tahay.
Adeegto Ethiopian ah oo Kaw Laggaga Siiyey Kuwait